Serena Williams weghachitela akwụkwọ nkwado maka Open Australia 2019 - Ụdị
Serena Williams weghachitela akwụkwọ nkwado maka Open Australia 2019
Mbinye aka nke onye mmeri tennis (na ọtụtụ ihe a na -ekwukarị) pụtara na Melbourne.
Ihe mkpuchi mbinye aka nke Serena Williams abụrụla ihe na -amasị ọha mmadụ kemgbe ọ laghachiri n'ụlọ ikpe tenis n'oge okpomọkụ gara aga maka French Open yi uwe ojii nke si na Nike nke ga -aga n'ihu machibido ya site na Tennis Federation nke France. (Ndị otu egwuregwu tenis nke ụmụ nwanyị guzoro n'akụkụ Williams, na-emelite koodu uwe ya iji kwado 'mkpụmkpụ mkpakọ ogologo-etiti ụkwụ' dị ka nke ya.) Ugbu a, maka asọmpi mbụ ya nke 2019, G.O.A.T. na -eme ka o doo anya na anya agaghị apụ n'oge adịghị anya.
Na Jenụwarị 15, Williams chere Tatjana Maria ihu na Open Australia na Melbourne. Ọ bụghị naanị na ọ meriri n'egwuregwu mbụ nke asọmpi a, mana o mere nke a na -eyi silhouette ama ama.
MELBOURNE, AUSTRALIA - JANUARY 15: Serena Williams nke USA na egwuregwu agba nke mbụ ya na Maria Tatjana nke Germany n'ụbọchị abụọ nke 2019 Australian Open na Melbourne Park na Jenụwarị 15, 2019 na Melbourne, Australia. (Foto nke James D. Morgan/Getty Images) James D. Morgan
Williams pụtara n'ụlọ ikpe ahụ yi akwa nkata ọzọ nke Nike mere. N'adịghị ka nke French mepere emepe, ụdị nke a dị mkpụmkpụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nwere nkọwa eriri na-acha ọcha na-acha ọcha na mbepu isi na azụ.
ndị a ma ama na -eteghị etemeete
Oh, o yikwara ya na tights net.
MELBOURNE, AUSTRALIA - JANUARY 15: Serena Williams nke United States na -agba aka azụ n'egwuregwu agba nke mbụ ya na Tatjana Maria nke Germany n'oge ụbọchị abụọ nke 2019 Australian Open na Melbourne Park na Jenụwarị 15, 2019 na Melbourne, Australia. (Foto nke Fred Lee/Getty Images) Fred Lee
Kemgbe ọ malitere ọrụ ya n'etiti afọ 1990, Williams ejirila ikike ya dị egwu chịkwaa ogige tennis ọ bụghị naanị n'echiche ya. Uwe Nike ọhụrụ ya na -enye ndị na -akwado ya ntakịrị ntigharị na mbido njem ejiji ya: Ọ na -echetara ya mbụ catsuit, nke Puma mere maka 2002 US Open.
UNITED STATES-ỌGỌTỤ 28: Mkpụrụ kachasị elu Serena Williams na-amụmụ ọnụ ọchị na-aga n'ụzọ na-aga Dinara Safina nke Russia, 6-0, 6-1, na agba nke abụọ nke US Open na National Tennis Center na Flushing Meadows-Corona. Park dị na Queens. (Foto nke Howard Earl Simmons/NY Daily News Archive site na Getty Images) Akwụkwọ akụkọ New York Daily News
Anya Williams 'Australia Open bụ akwa izizi mbụ ya kemgbe asọmpi French 2018. Nke ahụ bụ asọmpi mbụ ya kemgbe ọ mụrụ nwa, a na -ahazikwa anya nkewa ahụ ka ọ ghara igbochi mkpụkọ ọbara. Ọ bụ ezie na Federation Tennis nke France abụghị onye na -akwado ya. Nike guzoro n'akụkụ onye na -eme egwuregwu, na -akpọ Williams 'dike.'
PARIS, FRANCE June 2. French Open Tennis Tournament - Ụbọchị nke asaa. Serena Williams nke United States na -eme mmemme mmeri ya megide Julia Goerges nke Germany na Court Suzanne Lenglen na Asọmpi Singles ụmụ nwanyị na asọmpi French Open Tennis 2018 na Roland Garros na June 2nd 2018 na Paris, France. (Foto nke Tim Clayton/Corbis sitere na Getty Images) Tim Clayton - Corbis
Williams eyighị ka ọ na -echegbu onwe ya, n'agbanyeghị: ọ gwara ESPN na ọ ga -abụ na ọ gaghị eyiri uwe ahụ ọzọ, n'ihi na 'mgbe ọ gbasara ejiji, ị chọghị ịbụ onye omekome ọzọ.'
Yiri uwe Australia mepere emepe enwela nnukwu onye ofufe: di Williams, Alexis Ohanian, tweeted na ọ nọ 'ebe a' maka romper ya.
Lelee na Twitter
Akụkọ ndị metụtara:
Uwe Tennis kacha mma nke oge niile
gbakwunyere nha biker shorts ekike echiche
Serena Williams kpọrọ Roger Federer 'Onye Kasị Ukwuu nke Oge Niile' Ka emechara egwuregwu Tenis akụkọ ihe mere eme
Serena Williams kwuru na ọ ka nwere ike na -achọ ọdịmma onwe ya n'alụmdi na nwunye ya, na nke ahụ bụ naanị ihe m chọrọ
mousse kacha mma maka ntutu kwụ ọtọ
ngwa ntutu maka ntutu siri ike
esi eme microneedling n'ụlọ